Yini okumele ulindelwe kusuka kwenkampani yokusebenza efanele?
Wake wazibuza ukuthi iyiphi inkampani yokwenza injini yokusesha? Namuhla, ukuqeqeshwa kochwepheshe be-SEO kuphakamisa imibuzo eminingi kusukela labaqeqeshi benza imisebenzi eminingi eyinkimbinkimbi esiza ukubeka iwebhusayithi yakho ephakeme ku-SERP. Ukuze siqonde ukuthi yini okudingeka silindele kusuka kwenkampani yokusebenza, sidinga ukuza ngemuva kwesimo. Kulesi sihloko, ngizokunika ukuqondisisa ku-search engine optimization sphere futhi ubonise ukuthi yini i-SEO ochwepheshe abayenzayo ukuthuthukisa amawebhusayithi abo.
Ngingathanda ukuqala lesi sihloko ngokukhomba ukuthi kunemithombo emine yemigwaqo eyinhloko: okuphilayo (ukusesha), ukudluliselwa, ukukhokhwa kanye nenhlalakahle. Kodwa-ke, ithrafikhi ephilayo iyona mgwaqo ohlosiwe kakhulu. Kusho ukuthi ithrafikhi ehlosiwe oyenayo ekubuseni usesho lwamagama angukhiye afanelekayo, amathuba amaningi okuguqula ukuvakashelwa ekuthengiseni nasekutholeni imali.
Isibonelo, unomkhiqizo owodwa, futhi ungathanda ukuyithuthukisa ku-intanethi. Ukhethile igama lesizinda futhi uqashiwe abathuthukisi bewebhu abaqeqeshiwe abazokwakha iwebhusayithi noma ikhasi lokufika. Isayithi lakho liqalisiwe. Kodwa-ke, yiqiniso, awutholi ukugeleza komgwaqo esizindeni sakho ngesikhathi esisodwa. Futhi uqala ukuzibuza le mibuzo elandelayo: "Ubani owaziyo ngaphandle kwami ​​nomyalo wami wokuthi ngisungule iwebhusayithi?", "Ingabe abasebenzisi bayazi okuthile ngomkhiqizo wami?" Nokuthi "Ngingayithuthukisa kanjani ukuqashelwa kwegama lami futhi ngidonse izivakashi eziningi umthombo wami wewebhu? ".
Yonke le mibuzo ingaphendulwa ngumxhumanisi omuhle we-SEO noma inkampani yokuthuthukisa. Ngakho-ke, isigaba esilandelayo ngemuva kokuqaliswa kwewebhsayithi kuyisimo sewebhusayithi ngokuvumelana nazo zonke izindinganiso zenjini yokusesha. Uma unquma ukukhulisa ukufika kwakho emakethe futhi ukwandise izinga lokuguqulwa kwakho, kuzomele udinge inkampani yokusebenza okuthembekile. Ithimba labachwepheshe lizokuqondisa endleleni yakho eya empumelelweni.
Yimuphi inkampani yokusebenza eyenzayo?
izinkampani ze-SEO zinendlela ehlukile kwiprojekthi ngayinye abayisebenzayo. Ngaphambi kokuqala umkhankaso wokwenza ngcono, ngokuvamile baqhuba ukuhlaziywa kwe-market niche kanye nokucwaninga komncintiswano. Indlela yokwenza iphrojekthi ethile ye-intanethi izoxhomeke ekutheni umkhankaso, i-niche yemakethe, isabelomali, kanye nezinye izici eziyisisekelo.
Okokuqala, inkampani yokwenza kahle yenza isingeniso sesakhiwo sesayithi. I-Google nezinye izinjini ezifunwa emhlabeni ezifana ne-Yahoo ne-Bing zigcizelela ukuthi zibeka amasayithi angcono awenzelwe abasebenzisi esikhundleni sezinjini. I-website yakho kufanele ngokusobala ihleleke kahle futhi ilula ukuhamba. Kodwa-ke, kufanele futhi ihlelwe kahle kwizinjini zokusesha ukuze ihambise okuqukethwe kwakho.
Ngakho-ke, ochwepheshe be-SEO banikeza amaqhinga alandelayo okuthuthukisa isakhiwo sakho sesayithi:
silungise amaphutha esayithi;
isebenzise amaRobhothi. ifayela le-txt;
kuthuthukise isimo sakho se-index;
isebenzise isitifiketi se-XML;
ngcono ijubane lakho lekhasi;
ukwandisa izakhi ze-meta.
Isigaba esilandelayo sokuthuthukisa iwebhusayithi kungukuhlaziywa kokuqukethwe. Ngalesi sikhathi, ochwepheshe be-SEO basebenzisana nabathengisi bokuqukethwe ukuze bakhe okuqukethwe okuyingqayizivele nokufanele. Ngaphezu kwalokho, bahlola okuqukethwe okukhona kusayithi lakho futhi bayithuthukise uma kunesidingo. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe be-SEO baxazulule njengezindaba ezifana nokuqukethwe okuphindaphindiwe, amakhasi angekho, namakhasi aphansi okusezingeni Source .